Qarax ka dhacay Muqdisho - BBC Somali - Warar
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 16 Febraayo, 2013, 13:52 GMT 16:52 SGA
Baabuur badan ayaa ku gubatay qaraxa dhismayaashana waxaa soo gaaray qasaaro.
Qarax ayaa ka dhacay maqaayad ku taalla xeebta Liido ee Muqdisho. Qaraxa ayaa wuxuu ka dhacay meesha baabuurta la dhigo. Hal qof oo ka mid ah shaqaalaha maqaayada ayaa dhintay saddex kalena dhaawac fudud ayaa soo gaaray.
Maqaayada oo la yiraahdo Liido Sea Food, waxay u dhow dahay xeebta Liido waxayna ka mid tahay meelaha ay wax ka cunaan dhalinyarada reer Muqdisho.
Baabuur badan oo taalay meesha qaraxa uu ka dhacay ayaa gubatay.